Madaxwayne Biixi Toban Bilood Iyo Toban Waxqabad Oo Baxadle,Nidamka Dawladdnimo Iyo Arimaha Bulshadda Si Xeeldher Ugu Qotoma.
Sunday 4th November 2018 10:55:19 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Haddii aatahay Masuul mid sare iyo hoosaba ahaatee, waxaa lagama maarman ah,
in aad jeexdo waddo Cadd oo qorshe hadafaysenleh, iyo halbeega Cabiraya kolba inta talaabo eed qaadayso, ayaa waxay kaaga baahantahay in fikir iyo ka fiirsasho xeeldheer aad galiso si uu aayotiin unoqdo qorshaha aad qaadanayso. Sidaa darted ayaa qasaba in wakhti ayqaataan. Hadaba haddii aad tahay masuulka dalka ugu sarreeya kuna dulsaarantahay ,Masuuliyadda intaa soo milyan waxaa qasaba in aad talaabo kasta ka taxadirkeeda waxyeelo iyo waxtarba aadka fikirtaa waa Muhiim.
Masuulka dalka ugu sarreeya waxaa marwalba horyaal Caqabado Bili,aadamku sababo iyo Midrabaaniyaba. Badanka dadku matiriyaan inta caqabadood iyo dhibaato lasoo darista Masuulka. Se kaliya waxaa ayrabaan ama indhuhu qabtaa ayey tix galinta siiyaan, horaa loo yidhi habar fadhida lagdini lafudud
Somaliland Madaxwayne Biixi waxaa uu talada hayey toban bilood oo kaliya waxaana uu ku dhaqaaqay Toban waxqabad oo midwalba miisaankiisa iyo go aan qaadashadiisa leeyahay
Madaxwayne walba waxaa lagula xisaabtamaa waxaa uu balan qaado wakhtiga uu ololaha ku jiro.
Madaxwayne Biixi waxaa uu marwalba sheegijiray inuu awooda saarayo, Waxsoo saarka, Caafimaadka, Waxbarashadda iyo SHaqo abuurka dhalinyarada oo shaqo qaran ugu horayso. Hadaba aynu dul istaagno. Midwalba sida uu ugu dhaqaaqay kaliya waxaa madaxwaynaha looga baahanyahay ku dhaqaaqid waxaa uu waa xaasi ku shaqaynayo se Hirgalinta iyo Fulinta waxaa lagala Xisaabtamayaa Masuulka uu u igmado ayey ku xidhantahay. Madaxwayne Biixi Waxaan ka hayaa Sagaal Bilood iyo toban wax qabad Bishii hore waxaan ujaray Talo iyo Xog urursii Madaxwayne Biixi Hogaamin Samafalnimo, ugargaarid dadka jiicdasen kana madhan Faan iyo BUUN buunin ayaa ku ilhaaman isku kalsooni shakhsinimo, Dawladnimo iyo Shacabkiisaba Tobanka wax qabad
1= Wax soo saarka oo siwayn hormar looga sameyey
2= ka dhabaynta National Service Shaqo qaran
3; xaqiijinta Caafimaadka iyo Miisaaniyadiisii
4; Waxbarashada oo isbadal miisaaniyadeed oo baladhan laguu sameeyay qorshe iyo nidaam cusub
5; Isku tubarididda iyo Nidaaminta habdhismeedkii Wasaaradaha iyo hayadaha
6: Soo celinta Laamaha dakhliga ee ka maqnaa gacanta dawladda
7: Hirgalinta Maalgashigii ugu Baladhnaa ee dawladdii Hore seexday Dakadda DP world Calamka kayabisay sumcadda qarankana kor uqaaday
8: Soo celinta haamaha. Cigaal Airport . plate numberka dawladdah
9: Hubintii, habayntii Shaqaalaha Dawladda iyo Diwaangalintii
10: Meelmarinta iyo DHAQAN GALINTA Xeerar Tirobadan
W/Q Xasan Maxamed Muuse
Madax Dhaqameedkii Bariga Sanaag Iyo Madaxweyne Muuse Biixi Maxay Ka Wada Hadleen [Nuxurka Wada Hadalkoodii]
[War Hadda Soo Dhacay:-] Qoys Madaxweyne Biixi Ugu Baaqay Inuu Madaxtooyada Cusub Ka Dhiso Dhul Ay Leeyihiin
[Akhriso:—] Madaxweyne Biixi Iyo Su'aalaha Loo Baahanyahay Inuu Ka Jawaabo Ee Ka Dhashay Socadaalkiisii UAE